Yambiro yechiratidzo chechikara 666
Bhaibheri rinonyevera pamusoro peichi mucherechedzo - saka ibasa redu rechiKristu kuita saizvozvo. 195
Hauna kuponeswa nekuda kwekuti iwe uri wechiMuslim wechiJuda kana ungochani
Usazvirega uchinyengerwa 71
Chokwadi nezve FO Nilsson
Yekutanga Baptist Baptist Pentekosti 151 2
Jesu aive akaenzana naMwari, akava munhu, akafira pamuchinjikwa uye Mwari vakamukwidziridza
Bhaibheri rakajeka pamusoro pekuti Jesu ndiani. 1
Nhare mbozha dhijitari - nemaune kuita muropa
Inguva yekutanga kuzvirumura isu nevana vedu, kubva kune yakanyanya kupindwa muropa nhare mbozha. 18
Vatatu ava chinhu chimwe
Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene chinhu chimwe. 11
Mutadzi akashevedzera Allahu akbar paakabaya vanhu muVetlanda
Kuchema kwevaMuslim kwakanzwika muVetlanda - Chapupu chinodaro 15
Kutyisa kunotyisa munzvimbo shanu muVetlanda - 8 vakakuvara
Ona mamwe mavhidhiyo! Gandanga rakarwisa munzvimbo shanu dzakasiyana muVetlanda, 4 vakakuvara zvakaipisisa. 0
The TikTok chiteshi Apg29.nu - Zvino kupfuura vateveri 22,000
Chiteshi chaChrister Åberg chave kubudirira online. 1
Zuva rezvitadzo pasi rose - riripo here?
Kune rimwe zuva here rinotarisa kuzvitadzo zvepasi rose? 7
Vecka 16, fredag 23 april 2021 kl. 19:03